Banyere Anyị - Qingdao Antai Arọ Industry Co., Ltd
Qingdao Antai Arọ Industry Machinery tọrọ ntọala ke 2003, chie gbanwere ya ugbu a na aha na 2011. Emi odude ke mara mma n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri Qingdao, ọ bụ naanị 30 km ka Qingdao ọdụ ụgbọ mmiri, adaba n'ihi na mbupụ njem. Anyị ogbako ebe na-ekpuchi ihe karịrị 15000 square mita, na ọ bụ a nnyocha, imewe, rụpụta, echichi na ize factory ụlọ ọrụ maka n'elu finishing, gburugburu ebe obibi-echebe ma na foundry ngwọta.
Company nwere ọtụtụ ahụmahụ na-eweta na oru na ọkachamara na-arụ ọrụ ọnụ, na-tumadi na-arụpụta shot ọgbụgba ọkụ igwe, ájá reclamation ngwá, ịkpụzi ngwá, na ájá mkpoko. Qingdao Antai dị ike na-enye ndị na-abụghị ọkọlọtọ imewe na rụpụta dị ka ndị ahịa mkpa.
Qingdao Antai gbara ọgbụgba ọkụ technology ga-itu n'anya gị na ya nwere ọgụgụ isi imewe, ọhụrụ nkọwa na karịsịa inogide mmiri. Anyị na-enye gị onye na mkpokọta solution, dị ka anyị nwere onwe anyị mmepe, engineering, mmepụta na mgbe-sales ọrụ.
All usoro na-nyochara na-anwale tupu nnyefe anyị noo iji hụ na ngwa ngwa echichi na saịtị ma napụta a pụrụ ịdabere na ngwaahịa na oge ọ bụla time.Here na Qingdao Antai, mgbe-sales support bụkwa a n'elu mkpa ka anyị hụ na ị na-niile enyere gị mkpa na gị ọhụrụ nye na-anwale system.Our kasị ukwuu ụgwọ ọrụ bụ afọ ojuju nke ndị ahịa anyị na-arụpụta-enweta ihe a niile.
The ụlọ ọrụ mechaa ISO9 0 0 1: 2 0 0 8, ISO 1 4 0 0 1: 2 0 04, OA akwụkwọ. Anyị ụlọ ọrụ management nditịm dị ka mba ụkpụrụ ISO9 0 0 0 quality usoro mmejuputa iwu ọrụ.
Anyị ike ogologo okwu mmekorita ya na mba ika suppliers, dị ka ABB moto; Ikwa gia igbe, Mitsubishi / OMRON / Siemens electric mmiri, SMC cylinder, SKF & NSK amị, na Asco usu valves. Na àgwà ngwaahịa, asọmpi price na enyịn ọrụ, anyị na ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe na-ere anụ ụlọ ahịa na exported ka Amercia, Germany, Russia, Australia, India, Greece, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Uruguay, Ecuador, Colombia, Israel, Ukraine, Bangladesh, Uzbekistan, Philippines, Hungary, Macedonia na Indonesia wdg
Anyị na-esoro "eziokwu bụ kasị mma n'ire, ahaziri ọrụ bụ ikpeazụ ngwaahịa. Ahịa afọ ojuju kasị ukwuu kwalite mmepe nke ụlọ ọrụ. "Ilekwasị ka a zuru okè quality management usoro na netwọk ọmụma nzaghachi usoro maka ịgba akwụkwọ iche iche maka onye ọ bụla ahịa, na-enye ndị ahịa na kacha n'anya ma na echiche, oru oma na mgbanwe zuru ọrụ.
anyị na-atụ anya na-arụ ọrụ na gị na ụlọ ọrụ ndị ji ezi obi imekọ ihe ọnụ!